Deni oo ka hadlay lacag ay dowladda federaalka u dirtey Puntland
GAROWE, Puntland - Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Daah-furay Mashruuca Waxbarasho oo ballaaran, kaasoo halku dhigiisu yahay Waxbarashadu yeyna ku Seegin, ama "Education cannot Wait".
Mashruucaan in muddo ah howshiisa laga soo shaqaynayay ayaa waxaa ka faa'idaysan doona 40,000 arday oo ku nool gobolada kala duwan ee Puntland.
Sidoo kale waxa uu taageeri doonaa dhinacyada tababarada Shaqaalaha Wasaarada Waxbarashada, Macallimiinta iyo sidoo kale ardayda kuwa baahiyaha gaarka ah ay haystaan.
Madaxweynaha dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo Mashruucaan daah-furay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu u leeyahay ardayda Puntland.
"Mashruucaan waxaan rajeynaynaa inuu saldhig u noqon doono inaysan marnaba jirin sabab ay ardaydu uga baaqdaan Waxbarashada oo mar walba iyo duruuf walba oo jirta ay la jaan qaadaan Tacliinta," ayuu yiri Deni.
Deni ayaa madaxda Wasaarada Waxbarashada ku booriyay in ay si hoose u eegaan Waxbarashada dadka reer guuraaga ah oo kamida ah meelaha la qorsheeyay inay mashruucaan ka faa'idaystaan.
Wuxuu u mahahceliyay wasaarada Waxbarashada Puntland iyo hay'adaha gacanta ka gaystay, isagoo oo kula kula dar-daarmay in mashaariicdaan iyo kuwa lamidka ah la dhowro siday tahayna ay u fulaan, la hareer marin, la lexjeclaysan la musuq maasuqin meeshay ku baboon tahay la marsiiyo.
Dhinaca kale, madaxweyne Deni ayaa wuxuu ka hadlay lacag ay dowladda federaalka ah u soo dirtey Puntland, taasi oo uu sheegay in aysan soo marin nidaamka saxda ah.
Lacagtaasi oo kamid ah taageerada uu caalamka siiyo Soomaaliya gaar ahaan mashaariicda horumarineed ayaa loogu talogalay dhismaha wadooyinka iyo arrimo kale.
"Waxyaabaha ay Soomaaliya qeybsano waxna waa kheyraadka waxna waa mashaariicda magac Soomaaliya lagu helay. Hay'addaha sida Save The Childern in ay mashaariic horumariyaa Baraawe ama Boosaaso haka sameeyaan, iyagaa xor u ah, waa hay'addo NGO ah oo sharci la siiyey, oo shaqadooda qabsanaya" ayuu yiri.
Deni oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray: "Laakiin, waxaan ka hadleenaa mashruuca dowlad Soomaaliyeed magaceeda lagu siiyey, wuxuu ubaahan yahay cidda qeybineysa iyo sida loo qeybinayo in ay cadaato.
"Waxaan aad uga xumahay in dowladda federaalka ay tiraahdo innagaa qeybinayna iyadda oo aysan sharci u lahayn. Hadii ay xitaa qeybin lahayd reer-reer iyo magaalooyin baa loogu gurayaa, aad baan uga xumahay," ayuu daba dhigay.
Madaxweynaha ayaa intaasi raaciyey: "Oo la yiraahdo, intii dhalinyaradda la kiciyo, garoonka Cawaale, garoonka. Hadaaanan Puntland nabad ka shaqeyseen, hadaanan tacliin ka shaqeyseen, ma banooni bey ciyaari lahaayeen horta".
Gabagabadii, madaxweyne Deni ayaa wuxuu kasoo horjeestay guddi uu madaxweyne Farmaajo u magacaabey wada hadalada Somaliland, kaasi oo uu sheegay in aanan wax talo ah haba yaraatee aanan laga gelin.
Xubnihii hore ayaa is-casilay markii ay ku fashilmeen in ay hirgeliyaan nidaamka xisbiyada badan.
Wasiiro uu magacaabay madaxweyne Deni oo la dhaariyey
Puntland 05.11.2019. 14:00
Deni oo ku baaqay in la is-cafiyo Ciidda Carafo owgeed
Puntland 10.08.2019. 22:00